एभिन्युज टेलिभिजनप्रमीसँग अर्कै युवती देखेपछि झुण्डिएर आत्महत्या ! - एभिन्युज टेलिभिजन
प्रमीसँग अर्कै युवती देखेपछि झुण्डिएर आत्महत्या !
1 Shrawan 2076 Wednesday 1:20 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : काठमाडौंको बालाजुमा प्रेमीको जन्मदिन मनाउन भनेर गएकी १६ वर्षीय किशोरी जेनी तामाङ मृत फेला परेकी छन् । त्रिपुरेश्वको सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएकी जेनी असार ३० गते साँझ बालाजुमा डेरा गरी बस्ने १९ वर्षीय भीम मगरको कोठामा गएकी थिइन् । उनले प्रेमीकै घरको शौचालयमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् ।
प्रेमी भीमको कोठामा गएको बेलामा भीमसँग अर्कै युवती देखेपछि जेनीको होस उड्यो । आफ्नो प्रेमीको कोठामा अर्कै युवतीलाई देखेपछि विवाद उत्पन्न भयो । उनीहरुबीच झगडा भयो । झगडापछि शौचालय गएकी जेनी केही बेरसम्म नआएपछि भीम शौचालय पुग्दा त्यहाँ उनी सलले झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् ।
भीमले उनलाई अस्पताल पुर्‍याएपनि बचाउन नसकेको बताइएको छ । घटनापछि प्रहरीले भीम र उनीसँगै रहेकी अर्की युवती प्रविना नगरकोटीलाई पक्राउ गरेर अनुसनधान गरिरहेको छ । प्रविना पनि भीमकी प्रेमिका रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।